Lalao maivana 5 no ho an'ny Android | Androidsis
Lalao maivana 5 izay azontsika sintonina amin'ny finday Android
Raha mandeha mitsangatsangana amin'ny Play Store isika dia mahita lalao Android an'arivony. Safidy tena malalaka amin'ny lalao amin'ny fomba rehetra. Ka saika ny mpampiasa rehetra dia afaka mahita lalao tian'izy ireo. Na izany aza, singa iray izay tsy maintsy raisina rehefa misintona lalao no lanjany. Satria tsy tianay ny lalao haka toerana be loatra amin'ny telefaona.
Soa ihany, manana lalao maivana maro ho an'ny android izahay. Noho ireo lalao ireo dia afaka mankafy fialamboly tsara ianao nefa tsy mila toerana be dia be amin'ny telefaoninao. Ka tsy isalasalana fa safidy mahaliana indrindra tokony hodinihina izy ireo.
Isaky ny misy lalao maivana kokoa ho an'ny Android, maro amin'izy ireo ambanin'ny 25MB. Ka izany dia tsy isalasalana fa fomba tsotra hankafizana lalao tsara izay zara raha mila toerana amin'ny telefaona. Avelanay ianao avy eo miaraka amin'ny lisitra misy ny sasany amin'ireo lalao maivana ireo.
2 Tsindrio Tap Dash
5 Lasagna voaendy
Mety ho iray amin'ireo lalao fantatry ny mpampiasa indrindra amin'ity sokajy ity. Lalao piozila izay tsy maintsy ampifanarahintsika amin'ny tile mitovy amin'ny isa mitovy, hampanjavona ireo. Ho fanampin'izay, ny haingana vitanao izany, ny isa bebe kokoa azonao atao amin'ny lalao. Ianao dia afaka koa mifaninana amin'ireo mpilalao erak'izao tontolo izao mitovy.
La maimaim-poana ny fampidinana ny lalao ho an'ny Android. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza izahay.
Tsindrio Tap Dash
Iray amin'ireo lalao mampiankin-doha indrindra sy mampiala voly izay hitantsika ao amin'ny lisitry ny lalao maivana ho an'ny Android. Tsy isalasalana, safidy tsara hankafizanao amin'ny fotoana malalaka anananao. Ny fandidiana ny lalao dia tena tsotra, satria tsy maintsy mandeha smiakatra ary mahazo valisoa. Na izany aza, tsy mahitsy foana io, izay mahatonga ny lalao tsy ho monotonous.
La maimaimpoana ity fampidinana ity ho an'ny Android. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza isika.
Lalao iray hafa izay miavaka amin'ny fialamboly sy ny tany am-boalohany. Indrindra fa ilaina ny manasongadina ny sary mitovy, satria heveriko fa tena nahomby izy ireo. Ankoatr'izay dia manampy betsaka amin'ny traikefa vokarin'ny lalao izy ireo. Ka nahavita asa tsara izy ireo tamin'izany. Izy io dia fitambarana mahaliana indrindra, satria izy io lalao milamindamina, fa miaraka amin'izay dia feno fotoana mampientam-po.
Ny fialantsasatra ny fiara dia tsy mbola nampiala voly kokoa noho ity lalao ity. Mazava be ny fomba fiasany. Mila mametraka fotsiny ny fiarantsika isika, na dia hahita ny tenantsika amin'ny toe-javatra samihafa aza isika. Izany no hiteraka izany fa tsy dia mora loatra amin'ny tranga sasany. Ka hametraka ny faharetantsika sy ny talentantsika hizaha toetra izany raha ny parking no resahina.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Na dia toy ny lalao teo aloha aza dia mahita fividianana ao anatiny isika.
Ataovy andrana ny fahaizan'ny chef anao amin'ity lalao maivana ho an'ny Android ity. Ao anatin'izany dia mila mahandro lovia matsiro isika. Ka mila mampiasa ireo akora ilaina rehetra amin'izany isika. Inona koa, tsy maintsy ataonao tsara indrindra ny lovia andrahoinao. Ka mila manao izay farany vitanao ianao amin'ity lalao fandrahoan-tsakafo mampiala voly ity. Tsy mandresy lahatra ahy ny sary, fa milamina ny lalao.
La maimaimpoana ity fampidinana ity ho an'ny Android. Ao no ahitantsika dokam-barotra, na dia tsy misy fividianana aza.
Mazava ireo lalao dimy ireo, izy rehetra dia milanja latsaky ny 25MB. Safidy tsara apetraka amin'ny findainao izy ireo ary mankafy lalao mampiala voly izay zara raha mila toerana. Ahoana ny hevitrao momba ireo lalao ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Lalao maivana 5 izay azontsika sintonina amin'ny finday Android
Ny lalao ankamantatra tsara indrindra ho an'ny Android
Samsung dia namoaka ny fanavaozana ny fiarovana ny volana janoary ho an'ny Galaxy S8 sy S8 +